Sina sy Japana: Fanehoan-kevitry ny Sinoa mikasika ny fifidianana Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Septambra 2009 11:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, English
Nandresy tamin'ny vokatra ankapobeny tamin'ny fifidianan'ny 30 Aogositra ny Antoko Demokratikan'i Japan (DPJ), izay namarana ny 50 taona maherin'ny fitondrana tsy ankizaran'ny Antoko Liberaly Demokraty (LDP) nanomboka tamin'ny 1955. Ny fandresen'i Yukio Hatoyama- mpitarika ny DPJ dia noraisina ho toy ny fiandohana vanimpotoana vaovao amin'ny politika Japoney. Lavitr'izay ho vokatr'izy ity eo amin'ny fifaneraserana Sino-Japoney, mety hahaliana ihany ny mahita ny fanehoan-kevitry ny vahoaka Sinoa manoloana ny fiovana ara-politikan'ny firenena mifanila aminy.
NeiC ao amin’ny forum Tianya dia nampitaha ny mahazo ny LDP amin’ny an'ny Antoko Kaominista Sinoa (CCP):
(Raha ny voalazan’ireo tsikeram-baovao avy any UK – [ry zareo Anglisy]) Antony telo lehibe no nandakàn'ireo mpifidy ny LDP:
1. Ny “Iron bowl” dia tsy misy intsony
2. Ny olan’ny fahanterana dia miharatsy
3. Ny olan'ny toeram-ponenana manaikitra
50 toana nitondràna tsy tapaka, fotoana izao hanovàna amin’izay, eo amin'ny faha-60 taonany ny antokonay izao. Voasarika hanao fampitahana amin'ireo roa ireo ny vahoaka.
Vitamin214 dia namerina namoaka tsikera iray avy amin'ny ifeng.com momba ny valin’ny fifidianana tany Japana ao amin’ny forum Tianya. Ny lahatsoratra miteny fa ny fifidianana tany Japana dia itaràfana ny fivoaran’ny politika demokratika liberaly izay mivoatra avy ao anivony ihany. Na dia eo aza izany, ao amin’ny fitsikerana, maro ny tsy nanaiky. Ohatra, guolurens niteny
Afaka ny hiova???
Efa nitambotsotra ny toekarena Japoney tato anatin'ny ny 20 taona teo ho eo. Tsy dia manam-pahatokisana loatra ny ao amin’ny DJP ny Japoney, nasehon'izy ireo fotsiny hoe tsy zakany ny tsy fahombiazam-pitantanan'ny JDP . Nefa kosa, na dia ny Antoko Demokratika aza no eo amin'ny fitantànana, tsy mbola misy vahaolana ny olana any Japana.
Kabaico koa dia niteny,
Inona ny fahasamihafany? Mitovy amin’ny fisafidianana iray amin'ny fianakavian’i Kennedy sy Bush izy ity. Raha mikatso ny iray amin’ireo fianakaviana, dia lasan’ny anankiray indray ny fahefana. Ny fahefana dia eo ambany fifehezan'ny iray amin’ireo fianakaviana matanjaka. Ilay ambara ho fiovan’ny Antoko dia tsy inona fa ny fitsinjarana ny fahefana amin’ireo antoko roa lehibe misongadina fotsiny.
Mitovy amin’ny fisafidianana na ho i China Telecom na China Unicom ity izy, tsy dia misy fahasamihafany be manakory.
Ao amin’ny Qiangguo Luntan, Sinoa mpampiasa aterineto iray mieritreritra fa,,
Saiky isan-taona no miova ny Praiminisitr’i Japana. Tsy dia manara-penitra loatra ity zavatra ity na dia ao anaty rafitra demokratika lafatra indrindra aza ary amin’ny farany mety hitondra amin’ny fihetsiketsehan'ny olon-tsotra. Haha